Samsung Galaxy Buds Bluetooth နားကြပ်အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ Gadget သတင်း
Rafa Rodriguez Ballesteros | | ပစ္စည်းများ, ရုပ်ပုံနှင့်အသံ, တင်ပြချက်များ
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀ ရက်ကိုပြက္ခဒိန်မှာအချိန်အတော်ကြာမှတ်သားထားတယ် ဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့ Samsung ရဲ့နေ့ပဲ၊ စောင့်ဆိုင်းရကျိုးနပ်တယ်။ နောက်ဆုံး၌ Galaxy S20 နှင့်မတူကွဲပြားသောဗားရှင်းများတွင်ယနေ့မှန်ကန်သောတွေ့ဆုံခြင်းအပြင်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သည် ထို့အပြင်မျှော်လင့်ချက်များမြင့်တက်ခဲ့သောကုမ္ပဏီ၏အခြားထုတ်ကုန်။ ယခုအပတ်တွင်လည်းစကားများများပြောခဲ့သည် Samsung ၏နားကြပ်အသစ် ဒါပေမယ့်ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာသူတို့နဲ့တွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုတာတော့လုံးဝမသေချာဘူး။
ဒီအဖြစ်အပျက်ပုံစံအသစ်ကိုယူဆောင်လာခဲ့သည့်အံ့အားသင့်စရာများစွာပြီးနောက်၊ အသစ်က Galaxy Buds Samsung မှနားကြပ်သည် Apple ၏ကိုယ်ပိုင် AirPods နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲ၎င်းတို့သည်အခြားမည်သည့်မော်ဒယ်များထက်မဆိုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်ကိုမသိရှိဘဲ၎င်းတို့သည်ကဏ္inတွင်အလေးအနက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုတင်ပြလာကြသည်။
1 Galaxy Buds မှတင်ပြသောသတင်းများ
3 Galaxy Buds သည် AirPods ထက်သာလွန်သောပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်
Galaxy Buds မှတင်ပြသောသတင်းများ
Samsung Galaxy Buds နားကြပ်များ ကဏ္sectorအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်း၊ အချိန်ကာလလည်းရောက်လာပြီ။ သူတို့သည်ယခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Samsung ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အလင်းအားလုံး၏လက်အောက်ခံဖြစ်လိမ့်မည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာစျေးကွက်တွင်လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများနှင့်ခြားနားအောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Samsung ကအသစ်အဆန်းတွေဘယ်လိုအလောင်းအစားလုပ်တယ်ဆိုတာကိုငါတို့တွေ့ရတယ်၊ သူတို့မှာနေရာရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့သူတို့သရုပ်ပြကြတယ်။ Samsung အတွက်ကောင်းတယ်
၎င်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်မော်ဒယ်တော်တော်များများတွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ Galaxy Buds ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းရှိသည် ဘလူးတုသ် 5.0 ဆက်သွယ်မှုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတွင် connection ကိုတည်ငြိမ်စေရန်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်သောကိရိယာများအကြားလိုက်ဖက်သောစံ။ Samsung က ၄ င်း၏နားကြပ်အသစ်များကိုတပ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်သည် အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုထောက်ပံ့ပေးသောဆက်သွယ်မှုရှိတည်ငြိမ်မှုအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည် ဖြစ်နိုင်တယ် ရလဒ်ကဒီဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ခံတယ်၊ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့မော်ဒယ်သစ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။
La ကြိုးမဲ့အားသွင်း ၎င်းသည်ဤရက်သတ္တပတ်များတစ်လျှောက်တွင်စစ်ထုတ်ထားသောအရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သောကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောဤဂျက်ဂျက်အတွက် ပို၍ ကောင်းသောအချက်များ။ ထို့အပြင် မကြာသေးမီကလူသိများခဲ့သော Samsung Galaxy S10 တွင်ကြိုးမဲ့အားသွင်းမှုကိုအတည်ပြုပြီးသောအခါ၎င်းတို့သည်အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်လာသည်။ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းဖြင့်နောက်မျိုးဆက်သစ် gadget တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကြိုးမဲ့စကားလုံးများကိုပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ဝယ်။
တိုးတက်မှုပုံစံအသစ်တစ်ခုမှာဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Samsung နားကြပ်အသစ်တွင် 58 mAh ဘက်ထရီ သူတို့ကတိပေးတယ် အသုံးပြုမှုအထိ6နာရီ စဉ်ဆက်မပြတ်။ ၎င်း၏ယခင်ထက်အများကြီးပို။ ထို့အပြင်နှင့်အတူ တစ်ခုတည်း 15 မိနစ်တာဝန်ခံ ယင်း၏အမှု၌ငါတို့သည်ပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ် တစ်နာရီပိုပိုပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတယ်။
ငါတို့မှာaထိတွေ့လွယ်သောမျက်နှာပြင် တေးဂီတနှင့်ခေါ်ဆိုမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အပြင် Samsung အသံလက်ထောက် Bixby, ၎င်းတို့သည်အတတ်နိုင်ဆုံးတတ်နိုင်သမျှဉာဏ်ရည်တုကိုခံစားနိုင်သည်။
ဆမ်ဆောင်းဟာသူ့ရဲ့ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ကြိုးမဲ့နားကြပ်ပုံစံအသစ်ကိုကမ်းလှမ်းဖို့အာရုံစိုက်ခဲ့တယ် အကြောင်းပြချက်များစွာအတွက်။ ထုတ်လုပ်သူမှမျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကို Icon Xs မှမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ပြီးတော့စိတ်ကူးကဒီဟာကနောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ အရည်အသွေးညံ့တဲ့နားကြပ်မပါပဲ သူတို့ရဲ့အရောင်းမြေပြင်မှရတယ်ဘယ်တော့မှမ ထိုသို့နီးပါးက၎င်း၏ပစ်လွှတ်ကနေရပ်တန်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည် Icon X. ၏ကြီးမားသော Achilles ဖနောင့်ဖြစ်သည်။ သော်လည်း AirPods စတင်ခြင်းနှင့်အချိန်၌နေထိုင်ခြင်းသည်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ အခုအသစ်ပြန်လည်မော်ဒယ်နှင့်မည်သူမဆိုထက်အများကြီးပိုကောင်းတပ်ဆင်ထားတဲ့, Samsung သည်ကတ်အားလုံးအားစျေးကွက်တွင်အပြည့်အဝနားကြပ်ဖြင့်စားပွဲပေါ်တင်လိုက်သည်.
ကျနော်တို့အကြောင်းကိုကနေစတင်ပါ အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများနှင့် ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်အရာမှတက်အသက်ရှင်သောချော။ အရောင်ရွေးချယ်မှုကိုလည်းပညာရှိဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနားကြပ်မော်ဒယ်တွင်အဖြူရောင်အရောင်သည်အလွန်လှပပြီးအမှု / အားသွင်း၏အသွင်အပြင်သည်အလွန်ထင်ရှားသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအနက်ရောင်, အဖြူနှင့်အဝါရောင်အရောင်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
နားကြပ် ခေါ်ပုံစံရှိသည် အတွင်းပိုင်းနားထဲမှာလုံးဝနီးပါးသောသူတို့၏အမျိုးအ။ တစ်ပုံစံ မင်းကိုချစ်တာလားဒါမှမဟုတ်မုန်းတာလား။ သူတို့များသောအားဖြင့်တင်ပြသော "အားနည်းချက်" မှာထိုအရာဖြစ်သည် အကောင်းဆုံးညှိနှိုင်းမှုအဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်ခက်ခဲသည် တချို့အတွက်။ နားထဲ၌စံပြနည်းလမ်းဖြင့်ထားခြင်းမရှိပါ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအရည်အသွေးကိုသိရှိနားလည်ခြင်းသည်၎င်းကိရိယာသည်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ.
ပြီးပြည့်စုံသောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုကိုရရှိရန်နှင့်သူတို့လှပသောအရာအားလုံးတွင်သူတို့ပေးသောအသံကိုခံစားရန်အတွက် Samsung တွင်ပါဝင်သည် "ရော်ဘာ" ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားသုံးခုနားကသူ့ဟာသူအတွင်းပိုင်းကိုသွား အလွန်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်သာမန်လူတစ်ယောက်၏အကြားခြားနားမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်အသေးစိတ်တစ်ခု။
Galaxy Buds သည် AirPods ထက်သာလွန်သောပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်
၃.၅ ဂျက်နားကြပ် port တွင်ထုတ်ကုန်ပိုများလာခြင်းကြောင့်, \_ t ကြိုးမဲ့နားကြပ်သည်မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်း“ လိုအပ်သော” gadget တစ်ခုဖြစ်နေသည်။ ကြိုးမဲ့နားကြပ်ရှိခြင်းသည်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ ဦး စားပေးသောအရာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ငါတို့လည်းအားသွင်းဖို့ကြိုးတွေမလိုအပ်ရင်ကောင်းတယ်၊ ပိုကောင်းတယ်။
နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်များဖြင့်မည်သည့်နားကြပ်ကိုမဆိုအသုံးပြုရန်အဆင်မပြေသော adapter လိုအပ်သည်။ ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ ကေဘယ်လ်များသည်ခေတ်နောက်ကျနေသည်။ Samsung သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောမော်ဒယ်တစ်ခုနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်များဖြင့်ဤလမ်းကြောင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
Galaxy Buds ကနေထွက်သွားတယ် အလွန်သတိထားဒီဇိုင်း ကြောင်းမျက်မှောက်အားဖြင့်ကောင်းစွာတတ်၏။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကတခြားကိရိယာများနှင့်တူသည်ဟုပြောနိုင်ပေမယ့်။ ဒါဟာသူတို့၌ "လှုံ့ဆော်မှု" ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းတန်ဖိုးထားသည် ရိုက်နှက်ရန်အဓိကပြိုင်ဘက်, အဆိုပါ AirPods။ ထူးခြား။ စစ်မှန်သောထုတ်ကုန်ကိုတင်ခြင်းသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးလာပြီး Samsung က၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
၄ င်းတို့၏သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်သူတို့ပေးနိုင်သောအရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည် AirPods သည်ရာဇပလ္လင်ကိုမပိုင်တော့ပါ။ သူတို့အစဉ်အဆက်ကရှိခဲ့လျှင်။ ထို့အပြင်၊ ထိုနားကြပ်အသစ်များ၏စျေးနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းထက်နိမ့်မည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။ စျေးနှုန်းကဒေါ်လာ ၁၃၀ ပါလက်ရှိ AirPods ၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်နိမ့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » တင်ပြချက်များ » Samsung Galaxy Buds Bluetooth နားကြပ်အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ
၎င်းသည်စမတ်နာရီ Samsung Galaxy Watch Active ဖြစ်သည်